The Savile Horror 'Show'
The Shocking Saville Horror Show
[ISU NASYA 2) Islam Dan Kekuasaan Itu Seiring Sejalan, Tidak Berpisah!
Kes Nasya (1) : Nasya Takut Dengan Doa Orang Kristian?
Kes NFC: Shahrizat Kelu & Terkedu, Gagal Jawab Soalan Peguambela
လူပီသဖို့ဆိုတာ…“လူကို လူ လို့ပဲမြင်တတ်စမ်းပါ”
Wordless Wednesday – Rafa 103 days
Burma’s Thein Sein, an unlikely champion of reform
Wanita Dirogol Bergilir-gilir 10 lelaki Myanmar, Pendatang Asing Tak Gugat Keselamatan?
Freedom must be exercised with responsibility and restraint
Posted: 10 Oct 2012 10:27 AM PDT
Shahrizat blames media for NFCorp 'mess'
Shahrizat tells court she's not embarrassed by NFCorp failure
Posted: 10 Oct 2012 09:33 AM PDT
For millions of British children, Jimmy Savile was the TV presenter who promised to make their dreams come true. Now it appears he has been haunting the memories of some of them — and could be turning intoanightmare for his former employer, the BBC.
Savile, who died last year, hosted prime-time children's shows in the U.K., including the wishes-come-true favorite, Jim'll Fix It, and raised over £40 million ($64 million) for charity throughout his life. But inadocumentary aired on British commercial television last week, five women claimed to have been raped, molested or forced to commit sexual acts on Savile when they were underage, often on the premises of the BBC, for whom Savile worked. Since the documentary aired, over 40 women have made similar allegations.
The BBC is now facing accusations of an institutional cover-up as it emerges that producers, press officers, executives and other presenters at the BBC were aware of Savile's alleged behavior at the time. The publicly funded broadcaster buckled under pressure to acknowledge the "horrifying" allegations last week, vowing to support the police in any investigations, although it has insisted that there is "nothing to suggest any wrongdoing was ignored by management." Prime Minister David Cameron has described the allegations as "deeply, deeply troubling" and hinted inatelevision interview that Savile could be posthumously stripped of his knighthood.
The Sun (UK) reported: Family remove Jimmy Savile headstone out of 'respect to public'
Posted: 10 Oct 2012 09:14 AM PDT
Posted: 10 Oct 2012 10:30 AM PDT
Posted: 10 Oct 2012 06:37 AM PDT
Posted: 10 Oct 2012 06:17 AM PDT
Justeru itu GB melihat, saranan Nasya itu sudah jauh kesasar. Seolah-olah menyuruh kita berjabat tangan dengan UMNO dan kemudian membiarkan kuasa itu diboloti UMNO untuk terus memperkosa Islam. Saranannya itu ungguh merbahaya untuk umat Islam!
DAP S'wak: Dakwa doa 'Msia jadi negara Kristian' berniat jahat
DAP Sarawak menafikan dakwaan bekas timbalan presiden PAS Nasharuddin Mat Isa bahawa bacaan doa supaya "Malaysia menjadi negara Kristian" diadakan dalam majlis makan malam anjuran parti itu selepas pilihan raya negeri Sarawak tahun lalu.
"Kami serahkan kepada PAS untuk tindakan sewajarnya," katanya. -mk
Nasha dakwa ada pihak anjur doa 'M'sia jadi negara Kristian'
Bekas timbalan presiden PAS Nasharuddin Mat Isa hari ini mendakwa, satu majlis kesyukuran yang diadakan di Sarawak tahun lalu menganjurkan doa supaya "Malaysia menjadi negara Kristian".
"Saya nak menyebut, dan saya sebut ini untuk mengajak suara ummah menjadi satu, berdepan strategi yang dirancang oleh musuh Allah khasnya di Malaysia ini.
"Dan dalam majlis kesyukuran itu antara perkara yang disebut dan didoakan adalah doa supaya Malaysia menjadi negara Kristian.
Kerana kemenangan yang besar sudah ada doa supaya Malaysia jadi negara Kristian," katanya.
Nasharuddin juga berkata, beliau menimbulkan "isu semasa yang dihadapi ummah" itu dalam konteks dakwah dan realiti politik waktu ini.
Dalam ucapannya di Pusat Dagangan Dunia Putra itu, Nasharuddin turut menyelar pengerusi nasional DAP Karpal Singh yang bertegas untuk meneruskan prosiding saman ke atasnya.
"Saya nak kata yang (Karpal) anti-Islam dan bukan anti-hudud," katanya yang menambah, Karpal tidak berhak menentang perundangan yang ditetapkan Allah.
Beliau berkata demikian ketika membentangkan kertas kerja di program Wacana Pemikiran Dan Peradaban Ummah ke-4: Seminar Dakwah Nasional anjuran Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia. -mk
Dakwaan Nasya itu pun tidak disertakan dengan bukti, sama seperti kes Hassan Ali dulu yang mendakwa usaha mubaligh Kristian yang kononnya berusaha memurtadkan umat Islam. Apabila didesak kemukakan bukti, ditunjukkan video yang lansung tidak ada standard dan tidak berkredibiliti untuk sebarang pendakwaan atau bahan bukti.
Hanya sekadar rakaman temubual pengakuan. Pengakuan boleh direka oleh sesiapa. Dan apatah lagi wajah orang yang membuat pengakuan tidak didedahkan kononnya di atas alasan keselamatan.
Begitu kes nya dengan dakwaan Nasya. Mana buktinya? Bila tiada bukti maka anda perlu bertanggungjawab dan menjadi hak umat Kristian mengambil tindakan undang-undang ke atas anda.
Katakanlah betul orang Kristian berdoa untuk menjadikan Malaysia sebuah negara Kristian, ia adalah menjadi hak mereka - tiada siapa boleh menghalang doa seseorang yang lain.
Mengapa Nasya timbulkan hal ini? Mengapa fobia sangat? Sebagai seorang yang beriman kepada Allah swt, mengapa Nasya kelam kabut (atau sengaja wujudkan suasana kelam-kabut?) sedangkan semua orang tahu bahawa umat Kristian berdoa kepada Tuhan Jesusnya, konsep ketuhanan yang samasekali tidak sama dengan umat Islam! Apakah Nasya turut beriman dengan Tuhan Jesus sehingga begitu kalut dengan doa mereka?
Musuh Nabi Muhammad, Abu Jahal namanya, pernah berdoa dengan bergayut pada kain Kaabah untuk menghapuskan Islam, pun tidak pernah Nabi Muhammad menghalangnya. Tidak pernahkah Nasya membaca kisah itu?
GB melihat ada agenda di belakang dakwaan Ustaz Nasya ini. Ia mirip dengan dakwaan Hassan Ali satu ketika dulu. Dan seperti ada pihak yang mengaturkan supaya Nasya membuat pendedahan bodoh tersebut.
Kata-kata bahawa Nasya menjadi tablibarut UMNO nampaknya menjadi semakin benar dan Majlis Syura tidak boleh lagi bersikap pasif dan tidak mengambil apa-apa tindakan ke atasnya. GB sudah kemukakan dahulu supaya Nasya dilucutkan keanggotaannya dari Majlis Syura, atau setidak-tidaknya memberi amaran keras kepada beliau.
Posted: 10 Oct 2012 05:37 AM PDT
Posted: 10 Oct 2012 05:35 AM PDT
I've still gotalot to learn about photographing forests and trees. My pictures generally turn out to beamess of confusion. A whole mess of confusing greenery interspersed with brown. Like, for example, I went up the Bukit Mertajam Hill at Cerok Tokun this morning and couldn't come back withadecent nature scenery. Up on the hill, I gave up afterawhile and decided to concentrate on some close-up photography. That was much, much better.
This turned out to be the best of the scenery shots with the Fujifilm Finepix F500EXR. I slowed down the shutter speed to the maximum two seconds, propped the camera onarock and allowedatwo-second timer to take over. Still not completely satisfactory to me, though. It is such times that I wish to ownaproper DSLR camera andatripod.
Fiddled with the panorama feature on this camera. I wanted to capture the vast expense of destruction along the hill track beside the stream. I don't know how long ago that the trees fell down and blocked the path across the stream but it took some careful steps over the trunks and branches to get over to the other side. I wonder when will the forestry people do something to clean up the mess.
Sticking to close-up photography was more fun. At least, I could control what I snapped. And the following pictures showed how nice the greenery could be. I won't say much because they are all green leaves...
...and green leaves....
...and more green leaves....
...and yet more green leaves...
...except for this holey one...
This is the bark on one of the trees.
Posted: 10 Oct 2012 05:41 AM PDT
"Setuju atau tidak, interaksi antara pasangan suami isteri itu penting sebagai pembangunan keluarga?," soal Ranjit.
"Apakah anda sebagai Menteri Pembangunan Wanita mengaplikasikan prinsip itu?," soal Ranjit lagi.
"Tidakkah anda malu yang telah tersebar di seluruh negara bahawa suami anda mengambil wang dan menyebabkan kerugian besar?" soal Ranjit.
Shahrizat dalam keadaan tertekan menjawab "Tidak".
NFC dipengerusikan suami Shahrizat, Datuk Seri Dr Mohamad Salleh Ismail manakala tiga anak beliau adalah pemegang saham dan pengarah di dalam syarikat Agro-Science Industry Sdn Bhd, syarikat induk yang memiliki hampir kesemua saham terbitan NFC dengan satu saham 'preference' dipegang kerajaan Malaysia.
Posted: 10 Oct 2012 03:08 AM PDT
Source : လူပီသဖို့ဆိုတာ in M-Media by ရဲမာန်အောင်
ထူးအောင်တစ်ယောက် ဦးဘခက်ဆီမှ အပြန်တစ်လမ်းလုံး စဉ်းစားလာမိတယ်.. သူပြောမိတဲ့စကားက တစ်ခွန်းထဲရယ်… ဦးဘခက် ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေက သူ့ဘဝမှာ တစ်ခါမှ မစဉ်းစားဘူးတဲ့ စကားလုံးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေးရင်းနဲ့ ရှက်တောင်ရှက်မိတယ်.. ကိုယ်ကလည်းသွားပြောမိတာကိုး။ ခံပေါ့။ ဦးဘခက်နဲ့ ထွေရာလေးပါးပြောရင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမျိုးရေးတွေ အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ "ဒီတရုတ်တွေ ကုလားတွေက တော်တော်ရှုပ်တယ်ဗျာ။ မြန်မာပြည်ကနေ မောင်းထုတ်လိုက်ရင် ပြီးရော နားအေးတယ်" လို့ပြောလိုက်မိတာ..
အဲဒါကိုသူက " ဘာ !!! ရှုပ်တယ်ဟုတ်လား။ မရှုပ်ဘူးကွ.. ရှင်းရှင်းလေးရယ်.. အဲဒါဘာလဲသိလား? အခုမင်းပြောတဲ့စကားမျိုးပြောတဲ့ကောင်ဟာ "လူ" ဆိုတာ ဘာလဲလို့သေချာ မသိလို့ပဲ.. အဲလိုတွေမသိသေးသရွေ့ ဒီလိုကိစ္စတွေ ဘယ်တော့မှ ပြေလည်မှာမဟုတ်ဘူးကွ.. မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းထူးအောင်-ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် လောကကြီးထဲကို ရောက်မလာခင်မှာ ရွေးချယ်ခွင့်ရခဲ့ လို့လား? "အူဝဲ"ဆိုပြီး အမိဝမ်းက ကျွတ်ကတည်းက အကုန်လုံး မွေးရာပါပုံစံ အတိုင်းကြီပြင်းခဲ့ကြတာချည်းပဲ။ မင်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ဒေသက မဆို မွေးဖွားရောက်ရှိလာနိုင်တယ်။ ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ အကျည်းတန်ခြင်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါစုံခြင်း မစုံခြင်းစတာတွေကို မင်းရွေးချယ်ခွင့်ရခဲ့လို့လား။ ဘယ်လူမျိုးစုမှာ ပေါက်ဖွားကြီးပြင်းရမယ် ဆိုတာရော ရွေးခွင့်ရခဲ့လား? မင်းမပြောနဲ့၊ ငါအပါအဝင် ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးလည်း ထိုနည်းတူစွာပဲလေ။ ရခဲ့လို့လား၊ မရနိုင်ဘူးလေ။ အဲဒီအချက်က လူသားဖြစ်တည်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တယ်။
ဘာသာတရားတွေနဲ့မဆိုင်ဘူး။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား၊ ကဲ…ဒါဆို ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူသားအားလုံးဟာ အဲဒီအခြေခံအချက် လုံးဝတူညီနေတယ်ဆိုတာ လက်မခံလို့ မရတော့ဘူး။ အေး ခက်တာက ရွေးချယ်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ ဘဝတွေ ကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်ထားပါလျှက်နဲ့ လူသားအချင်းချင်း စာနာထောက်ထားစိတ်ကင်းစွာ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက် လူမျိုးရေးခွဲခြားတာ ဘာကြောင့်ဖြစ်နေကြတာလဲ??? ခေတ်အဆက်ဆက် သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ လူတွေဟာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဒီလို အောက်တန်းကျတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တန်တော့ နှိပ်စက် အနိ်ုင်ကျင့်တဲ့လူရော အနှိပ်စက်ခံရရတဲ့ လူရော ဘယ်ပန်းတိုင်ကိုသွားကြရသလဲ? ရှင်းရှင်းလေး…. သေမှာပဲ။
ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် ရှောမှာပဲ၊ ဒါလည်းရွေးချယ်လို့မရတဲ့ အချက်ပဲ။ ကျွန်တော်ကဖြင့် ဟိုလိုလေးသေချင်ပါတယ်။ ဒီလိုလေးသေချင်ပါတယ် သွားလုပ်လို့မရဘူး။ သေချာတာက မင်းသေမယ်ဆိုတာပဲ …ဘယ်လိုသေမလဲဆိုတာ မင်းမသိဘူး။ တခြားလူတွေလည်းမသိဘူး။ ငါလည်းမသိဘူး။ကပ်သီး ကပ်သတ်ပြောလို့ရတယ်နော်.. ကင်ဆာရောဂါကျွမ်းနေတဲ့ လူဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ .. မရဘူး သူလည်း ဘယ်လိုလုပ်သေမယ်ဆိုတာ နောက်ဆုံး ထွက်သက်ထိ မသိနိုင်ဘူး။ ကဲ.. လိုရင်းကိုပဲပြောရအောင်ကွာ..။ မွေးတဲ့ပုံစံရော သေတဲ့ပုံစံရော (ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့) ဘဝတူလူသားအချင်းချင်း မင်းကတော့ တရုတ်၊ မင်းကတော့ ကုလား၊ မင်းကတော့ ကပ္ပလီ၊ မင်းကတော့ အင်္ဂလိပ် ၊မင်းကတော့ အမေရိကန်ဆိုပြီး သွေးခွဲနှိမ့်ချ ဆဲဆိုနေမယ်ဆိုရင် ပြောလိုက်မယ် မင်း…လူမပီသဘူး၊ ဘဝတူတွေကို မစာနာတတ်ဘူး၊
လူ့ဝန်းကျင်မှာ မင်းဟာ လူမျိုးရေး ခွဲခြားသူ(Racist) တစ်ယောက်ဖြစ်လာနေ တယ်ဆိုတာ သေချာသွားပြီ။ ကမ္ဘာ့နေရာ အသီးသီးမှာ လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိတယ်။ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားကြီးတွေလည်းရှိတယ်၊ နတ်ဘုရားကိုးကွယ်မှုတွေလည်းရှိတယ်။ ဘာသာမဲ့တွေလည်းရှိတယ်။ အဲဒါတွေဟာ လူမျိုးဆိုတာနဲ့ မပတ်သက်ဘူး။ ဘာသာတရားတစ်ခုကို လူမျိုးဆိုတာနဲ့ ဘောင်ခတ်လိုက်ရင် မှတ်ထား၊ မင်းကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို မင်းလက်နဲ့မင်း ကျဉ်းမြောင်းသွားအောင်လုပ်လိုက်တာပဲကွ။ ဘယ်ဘာသာတရားမှ ဘယ်လူမျိုးများသာ ကိုးကွယ်ရန်လို့ မပြဌာန်းထားဘူး။ ပြဌာန်းထားပါတယ်လို့ ဆိုတဲ့လူအရူးပဲ။ အဲဒီလို အရူးတွေများလေလေ ငါတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ အကျည်းတန်လာလေလေပေါ့ကွာ။ ဒါပဲ.. ရိုးရိုးလေးမှ တကယ့်ရိုးရိုးလေး။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ဒီနေ့ပြောပြောနေကြတဲ့ စကား အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုတာ.. အဲဒါလည်း မင်းကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူး၊ မင်းရဲ့လူမျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ အဲဒါကို ထိန်းသိမ်းဖို့တာဝန်ရှိတာ အဲဒီလူမျိုးထဲက မည်သည့်ဘာသာဝင် မဆိုတာဝန်ရှိတာပဲ ။ ဘာသာမဲ့လည်း တာဝန်ရှိတာပဲ။ အဲဒါမှ အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ကို တကယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာဖြစ်တော့မှာပေါ့ကွ။ အခုမင်းတို့ဟာက ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာမတူတာနဲ့ပဲ သတ်ဖို့ပုတ်ဖို့ စဉ်းစားနေတာ. .. မင်းတို့ဘဝတွေ တကယ်ကို သနားမိတယ်ကွာ… လူ ပီသဖို့ဆိုတာ မင်းတို့ဝေးပါသေးတယ်။ တည့်တည့်ပြောရရင် အဲဒီလိုစိတ်ရှိတဲ့လူ လူမဟုတ်တော့ဘူး။ လူစိတ်ပျောက်သွားတာ။
မင်းတို့ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ ကောင်တွေပြောတာရှိသေးတယ်။ ဘာတဲ့ " တရုတ်ဆိုင်ကမဝယ်နဲ့၊ကုလားဆိုင်ကမဝယ်နဲ့.. ဟုတ်လား" ရွံစရာကြီးကွာ.. အဲဒါမျိုးဆိုရင် ငါကမေးလိုက်ချင်တယ် " ဟိုနေ့က မင်းမားသားကြီး နေမကောင်းတာ ဆေးခန်းသွားပြတယ် မဟုတ်လား ငါလှမ်းတွေ့လိုက်သေးတယ်။ QQ3 ဆိုတဲ့ တရုတ်ကထုတ်တဲ့ကားနဲ့လေ… ဆေးခန်းရောက်တော့ ဆေးကုပေးတဲ့ဆရာဝန်ကြီးက ကုလားကြီး (ဟက်ဟက်)…. ထိုးတဲ့ဆေးတွေ ဆေးခန်းမှာသုံးနေတဲ့ တန်ဆာပလာတွေက တရုတ်ပြည်နဲ့ ကုလားပြည်က။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ မင်းဆေးမကုပဲလှည့်ပြန်လာမလား ? ဘယ်လာမလဲ .. ဆေးကုခဲ့တဲ့အပြင် ဆရာဝန်ကုလားကြီးကို ကျေးဇူးတင် စကားတောင်ပြောခဲ့သေးတယ် မဟုတ်လား။ ဟားဟားဟားဟား။ ဘယ်မှာလဲမင်းပြောခဲ့တဲ့ တရုတ်ကုလားကို အားမပေးနဲ့ဆိုတာ.. ဘယ်ရောက်သွားတုန်း။ နောက်မှတ်ထား လူပီသဖို့ပဲစဉ်းစား။ ဘောင်မကျဉ်းနဲ့။ လူလူချင်း ခွဲခြားတဲ့စကားတွေလည်း ငါ့ရှေ့ဘယ်တော့မှလာမပြောနဲ့၊ လူကိုလူလို့ပဲမြင်တတ်စမ်းပါ ငါ့တူရာ။
အားပါးပါး ထူးအောင်တစ်ယောက် သက်ပြင်းမောပါ ဟူးခနဲချမိသည် ။ ဦးဘခက်ဆီကပြန်လာတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက် နားထဲမှာ ပဲ့တင်ထပ်နေတာကတော့ "လူကို လူ လို့ပဲမြင်တတ်စမ်းပါငါ့တူရာ" တဲ့…
Posted: 10 Oct 2012 04:09 AM PDT
KUALA LUMPUR - Kadar tarif elektrik kekal pada paras semasa sehingga Jun tahun depan, kata Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Peter Chin Fah Kui, hari ini.
"Mereka perlu menjelaskan kepada pengguna bahawa meter baharu itu baik dan tidak ada yang salah mengenainya," katanya.
Posted: 10 Oct 2012 04:38 AM PDT
Sent in by v22Lm..Barakallahhu feekum.
Another easy lesson I'm sharing.
To Copy the name ofablog..and plant it on your blog list.
Highlight by one click on the name of the blog.
Tekan Edit once.
Click once on copy.
Go to your blog layout.
Then click on Edit on My Blog List.
Tekan right click in the box that says Add by URL.
Then Click on Add To List.
Then click Save..
Last2, Click Save Arrangement.
To highlight the web address, use mouse..otherwise use left button on the laptop.
(tekan jangan lepas k)
Dah sudah lepaskan.
Now, go to Edit..click sekali..Copy.
Go to the plus sign (+)
See the blinking inside the box.
If tak mintak blog owner permision then nasiblah..maybe dia suka, maybe dia mengamuk..:)
Posted: 10 Oct 2012 01:08 AM PDT
By 1945, Tillet's health began to fail and he was no longer booked as unstoppable. In his final wrestling match, in Singapore on February 14, 1953, he lost to Bert Assirati. In 1950, Chicago sculptor Louis Linck befriended Tillet and madeaseries of plaster busts commemorating him for his wrestling career. One of the busts is in the Chicago's International Museum of Surgical Science.
Posted: 10 Oct 2012 01:07 AM PDT
Saksi Utusan 'diasak' berhubung Islam & komunisme
Saksi pakar yang dipanggil Utusan Malaysia dalam saman sivil terhadapnya oleh Timbalan Presiden Mohamad Sabu 'diasak' berhubung kesimpulannya bahawa Mat Indera seorang komunis.
Peguam Hanipa Maidin mempersoalkan kewibawaan maklumat yang dibekalkan oleh pensyarah kanan yang berpangkalan di United Kingdom itu Karl Hack (gambar) di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang semalam.
Maklumat Hack semata-mata berasaskan kenyataan Mat Indera kepada polis ketika ditahan di penjara.
Mohamad yang lebih dikenali sebagai Mat Sabu menyaman akhbar Umno itu kerana menyiarkan beberapa laporan berhubung ucapannya di Tasek Gelugor, Pulau Pinang pada Ogos tahun lalu.
Beliau mendakwa laporan itu menggambarkannya sebagai penyokong komunisme, yang tabu dalam masyarakat Islam, ketika menyentuh peristiwa serangan komunis terhadap Balai Polis Bukit Kepong.
Hack dicabar sama ada termasuk dalam bidangnya untuk menentukan ideologi Mat Indera tanpa pengetahuan penuh tentang Islam atau kedudukannya terhadap komunisme.
"Mat Indera memiliki satu ciri khas, dia selalu membaca Quran. Kamu perlu memahami Islam sebelum membuat kesimpulannya bahawa dia seorang komunis," kata Hanipa ketika menyoal balas Hack.
"Kamu tentu sedar bahawa British sangat menentang Parti Komunis Malaya (PKM)? Itu pada tahun 1950-an, bilakah jadi salah untuk sertai komunis?" soal Hanipa.
"Kenyataannya (Mat Indera) mungkin diputar kerana ia daripada polis. (Adakah kamu tahu) bagaimana kenyataan itu boleh keluar? Dia diperdaya untuk menyerahkan diri kepada polis?" tanya peguam.
Melihat Hack bingung dengan perkara itu, Hakim Zakaria Sam berkata, peguam hanya mahu bertanya: "Adakah kenyataan polis itu boleh dipercayai?" -mk
Kes Mat Indera: Utusan import pakar dari England
TASEK GELUGOR: Utusan Malaysia mengimpot pakar sejarah dari England semata- mata ingin membuktikan bahawa Timbalan Presiden PAS, Haji Mohamad Sabu mengatakan Mat Indera bukan komunis adalah tidak benar.
Mohamad yang diwakili peguam Hanipa Maidin ketika perbicaraan semalam bertegas mengatakan Mat Indera pejuang Melayu yang kental demi mempertahankan tanah air daripada cengkaman British.
Kelmarin dan semalam merupakan pemulaan pembicaraan kes saman sivil Haji Mohamad Sabu terhadap Utusan Malaysia yang berlangsung di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang.
Saman itu berkaitan tindakan akhbar itu yang didakwa menuduhnya menyokong komunis ekoran kenyataannya yang mendakwa Mat Indera bukan komunis ketika menentang pemerintahan British semasa peristiwa Bukit Kepong.
Kenyataan itu dikeluarkannya dalam satu ceramah di Tasek Gelugor, Pulau Pinang pada Ogos tahun lalu.
Sementara itu Malaysiakini melaporkan, peguam Hanipa Maidin mempersoalkan kewibawaan maklumat yang dibekalkan saksi pakar Karl Hack itu yang menyimpulkan bahawa Mat Indera seorang komunis.
Hack dicabar Hanipa sama ada termasuk dalam bidangnya untuk menentukan ideologi Mat Indera tanpa pengetahuan penuh tentang Islam atau kedudukannya terhadap komunisme.
Ketika berceramah merasmikan cawangan baru PAS di Taman Sena Indah semalam pula, Mohamad berkata Utusan sanggup bebelanja besar dan mengimpot pakar dari luar untuk berdepan dengannya di mahkamah.
"Untuk membuktikan Mat Indera Komunis bagi menafikan kenyataan saya, Utusan Malaysia sanggup berbelanja besar membawa pakar dari England.
"Entah berapa kos pula mereka tanggung penerbangan, penginapan dan makan minum ketika di sini, " katanya.
Kes beliau akan disambung semula di mahkamah sama pada 15 hingga 18 Oktober ini.
Posted: 09 Oct 2012 09:33 PM PDT
Burma's Thein Sein, an unlikely champion of reform By Stephen Sackur Presenter, BBC HARDtalk
Foraman who was persona non grata in the US until last week, President U Thein Sein has been looking remarkably relaxed in New York City.
Admittedly I met him in the confines ofaswanky Manhattan hotel, surrounded by an entourage of advisers and minders, but nonetheless this former stalwart of Burma's military dictatorship is clearly relishing his rebirth as an unlikely champion of reform.
He even managedasmile for his interrogator from the BBC. All those years spent vilifying the evil and imperialist western media appear to have been forgotten.
In person Thein Sein lacks the charisma of the Nobel laureate democracy activist Aung San Suu Kyi, but his role in Burma's political re-awakening is as important as hers. Indeed the two of them appear to recognise they need each other.
They met in New Yorkacouple of days ago, on the fringes of the UN General Assembly, and they worked in tandem to persuade the Obama administration to ease the trade embargo which has long imposedachoke-hold on the Burmese economy.
President Thein Sein's biggest challenge is to take the more uncompromising elements of the military leadership with him as he presses ahead with reform. That's why his willingness to accept the possibility of Aung San Suu Kyi being elected president in 2015 matters so much.
It can only happen if the current military-dominated parliament sanctions changes to the constitution. Will they? At the moment many Burmese remain understandably sceptical, but the process of change – once started – is hard to stop.
At the beginning of my interview with the president there wasatelling moment. One of his most senior advisers took me to one side and said: "If there isaquestion I do not like, I will tell the president not to answer it."
"I'm sorry," I said, "that's not the way we do interviews at the BBC."
The aide grimaced but reluctantly agreed not to intervene. The president duly answered my questions. Another small step on the road toanew Burma.
Posted: 09 Oct 2012 09:29 PM PDT
Source: FB wall of Kay Thwel October 1
(လေဘေးထည် နိုင်ငံရေး) = စစ်ဗိုလ် သမ္မတ တို့ စစ်ဗိုလ် ၀န်ကြီးတို့ မီဒီယာတွေကို စကားပြောပြီ ဆိုလို့၊ လိုက်နားထောင်တာ၊ အချိန်ကုန်တာ နဲ့ တံတွေးစင်တာပဲ အဖတ်တင်တယ် ( ဦးစိုးသိန်း တံတွေးများ ) အဟောင်းတွေချည်းပဲ….လျှော်ဖွတ် မီးပူတိုက်ထားတဲ့..လေဘေးထည် နိုင်ငံရေးပဲ …….
အပြောင်းအလဲ တွေက၊ လေမုန်တိုင်း တခု လို။
ပြောရရင်တော့.. မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသ ကို တညတည်း နဲ့ မထင်မှတ်ထားပဲ ၀င်မွှေသွားတဲ့ နာဂစ် မုန်တိုင်းလိုပါပဲ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိင်ငံရေး နယ်နမိတ် တလျှောက်၊ တနှစ်လောက် အတွင်းမှာပဲ၊ မထင်မှတ်ရခက်.. ထင်မှတ်ရခက် စွာ၊ ၀င်ရောက်တိုက်ခတ် နေလေ ခဲ့ သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ တွေ့ဆုံမူ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အလှည့်အပြောင
်း။ အဲ့ဒီနောက်မှာ၊ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ ကြီး၊ ဖွင့်ထွား စွင့်ကား လာခြင်း။ မကြောက်တရား တွေ ထမ်းပိုးလို့၊ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား များ။ အကြောက်တရားတွေ ခ၀ါချ နိုင်လာတဲ့၊ (ဒေါ်စုပြောသလို )တမိုင်လောက်ဝေး သူ များ ရဲ့ အုတ်အော်သောင်းနင်း တက်ကြွမူ များ။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သော လွှတ်တော် အမတ်များ။ ရွေးချယ်စရာ နည်းပါးသော၊ လွှတ်တော်အမတ်များ။ ။ ၈၈ မူလ လက်ဟောင်း များ.. လက်ကျန်များ.. လက်သစ်များ။ ပြည်တော်ဝင်များ.. ပါတီဝင်များ စသည်ဖြင့်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ကြီး ပြန်လည် အသက်ဝင် လှုပ်ရှား လာခဲ့သည်။မြန်မာပြည် တ၀ှမ်းလုံးက၊ နိုင်ငံရေး နိုးကြားလာမူ တွေ ကလည်း၊ တရက်တလေ တောင် မနားတော့ လောက်အောင်၊ သတင်းများက ဖတ်လို့မကုန်။ လိုက်လို့ မကုန်။
ရခိုင်အရေး။ မြစ်ဆုံအရေး။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပြန်ဖွင့်ရေး။ ကချင်ဒုက္ခသည်အရေး။ ရခိုင် ဒုက္ခသည်အရေး။ လက်ပတောင်းတောင် အရေး၊ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်အရေး က အစ သမ္မတထောက်ခံရေး၊ သမ္မတ ကြိုဆိုရေး အထိ 'တို့အရေး' တွေ တိုးတက် များပြားလာသည်။ လှုပ်ရှား တက်ကြွသူတွေကလည်း အဖြူရောင် တွဲလက်၊ ခရမ်းရောင်ကွန်ယက်၊ အပြာရောင် တီရှပ်၊ အစိမ်းရောင် ပရောဂျက် ဆိုပြီး၊ ပန်းနရောင် ဒီမိုကရေစီ နောက်ခံ ပန်းချီကားပေါ်မှာ အရောင်စုံစုံ စုပ်ချက်ကြမ်းကြမ်း နှင့် ခပ်သွက်သွက် ဆေးစက်ခြယ် ကြလေသည်။မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ နိုင်ငံရေး ရေချိန်တက်နေပုံ က.. နိုင်ငံ နယ်နမိတ်ကိုတောင် ကျော်လို့။ ဥရောပ အမေရိကန် ကမ္ဘာတလွှားက၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ၀မ်းသာအယ်လဲ ဖြစ်ကြရ တဲ့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ပြည်ပ ခရီးစဉ်ကြီးတွေ၊ မိန့်ခွန်းတွေ၊ မေးခွန်းတွေ ။
အဲဒီ မိန့်ခွန်းတွေ လိုပဲ၊ မြန်မာပြည် အကြောင်း ထဲ့ပြောသွားတဲ့၊ သမ္မတ အိုဘားမား ရဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွင့် မိန့်ခွန်း။ အီရန် သမ္မတ အမဒင်နာဂျပ် နဲ့ အပြိုင်၊ ကမ္ဘာက စိတ်ဝင်တစား နားထောင် လိုက်ရတဲ့၊ မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ မိန့်ခွန်း။ လူတွေ မလည်း၊ ဒီရက်တွေမှာ၊ မိန့်ခွန်းတွေ မထပ်အောင် မပြတ်အောင် နားထောင်ရင်း၊ မိန့်မိန့်မူးမူးတွေပင် ဖြစ် လု မတတ်။လှိုင်းလူး သလို မိန့်မူး နေရတာက၊ မြန်မာပြည် အပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမူ တွေက၊ အကန့်အသက် နဲ့ ဖြစ်သွားလိုက်၊ တ၀က်ပွင့်သွားလိုက်၊ တပေါက်ပွင့်သွားလိုက်.. အပြည့် ပွင့်သွားလိုက် နဲ့ ၊ ခေါင်းမူးအောင် လိုက်ဖတ်နေရသည်။
နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်လောက် ပိတ်ဆို့ခံထား ခဲ့ရတဲ့၊ ကမ္ဘာကျော် ယုံကြည်ချက် အကျဉ်းသူကြီး က၊ ပိတ်ဆို့မူတွေ ဖွင့်ပေးဖို့၊ ပြေရာပြေကြောင်း ဆော်သြ ဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့ တာကိုပဲ၊ သူတို့ ကိုယ်တိုင် သွား ပြောဆို လာခဲ့ လိုက် လိုလို ။ တကမ္ဘာလုံးက ကြည်ညို ချစ်ခင် လေးစား ယုံကြည် ရတဲ့ မျက်နှာတခု ကို ထောက်ပြီး၊ 'ယုံကြည်ပါတယ်' လို့ ဆို လို့၊ အဖက်လုပ် ဆက်ဆံ ခံ ရတာကိုပဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုတောင် ရတော့မလိုလို ။ နယူးယောက်ကို တကူးတက ပြန်လာပေး ရတဲ့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုပဲ၊ အာဏာပါဝါ နဲ့ ကြိမ်စကြာ ရိုက်ခေါ်သလိုလို၊ သူတို့ကို ပဲ ခရီးဦး ဂါရ၀ လာပြုသလိုလို ။ လိုလို တွေ များလွန်းနေသည်။
နိုင်ငံတော် သမတကြီးကို အမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လာပြီးတော့ ဂရိ လုပ်တာပါ..နော်..အရင်တုန်းကလို မဟုတ်ဘူး..
..ကျနော်တို့က..အရင်တုန်းက မျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူး ခုတော့ မောင်နှမလိုပဲ လာတယ် နှုတ်ဆက်တွေ့ဆုံကြတယ်…
ဆိုတဲ့ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း – ရဲ့ RFA အင်တာဗျုးက၊ ဘာလိုနေမှန်းမသိသော၊ ဘာလိုလို ။
စစ်သားတွေကို လူတယောက်ခြင်း အဖြစ် မမြင်ပဲ၊ စစ်အာဏာရှင် စနစ် လို့ပဲ မြင်ပုံ ရတဲ့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ၊ ' ကျမ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ တော်တော်များများကို သဘောကျပါတယ်' လို့ ဖြေ လိုက် လို့ စီအန်အန် သတင်းထောက် အမန်ပွါ အံ့သြတကြီး ဖြစ်သွားရသလို၊ လူအတော်များများလည်း ဖြစ်ခဲ့ ကြပါသည်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်… ဟီလာရီ ကလင်တန် ပြောသလို၊ လူသတ်သမားတွေ လို့တောင် ခေါ်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့ တချိန်က အာဏာရှင်တွေ နဲ့ အခုအချိန်မှာ အလုပ် တွဲ လုပ်ဖို့ သဘောထား ကြီးကြီး ထားတဲ့၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာအပြည့် နဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက် ကို၊ အားလုံး ၀န်းရံ ထောက်ခံ ဖို့သာပင်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က၊ စစ်ဗိုလ် စစ်သားတွေ မတရားခဲ့တာကို မတရားခဲ့တဲ့ အတိုင်း၊ ထောက်ပြ ပြောခဲ့သလို၊ စစ်ဗိုလ်စစ်သားတွေ အပေါ်မှာ သူ သံယောဇဉ် ရှိတာကိုလည်း၊ အခါအခွင့်သင့် တိုင်း၊ ပြောလေ့ ရှိသည်ပင်။ သူမ ဖက်က၊ မြန်မာ့ တပ်မတော် နဲ့ ပတ်သတ်သမျှ အပေါ်မှာ၊ ဟောင်းဟောင်း သစ်သစ် ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး၊ တဖက်သတ် မေတ္တာနဲ့၊ ခွင့်လွှတ်ပေး.. လက်ကမ်းပေး နေ ပေမဲ့၊ တဖက်က၊ စစ်ဗိုလ်ကြီး တွေ တဖြစ်လဲ၊ သမ္မတကြီး တွေ၊ ၀န်ကြီးတွေ ကရော..။
တကယ်တော့ သူတို့တွေ လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မလေးစား အားမကျပဲ နေမယ် မဟုတ်ပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့၊ ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွတ် ဖော်ကောင် လုပ် သလို၊ ဒီအမျိုးသမီး မလွယ်ဘူး ဆိုတာမျိုး ၊ အရှိန်အ၀ါ ကို လန့်ကြမှာတော့ သေချာသည်။ အရင်တုန်းက မျက်နှာချင်း မဆိုင်ခဲ့တဲ့ သူ ကို၊ အခု မျက်နှာချင်း ဆိုင်တဲ့ အခါ၊ ဘယ်လောက် ရိုးသားမူ နဲ့ အမှန်တရား နဲ့ ဆက်ဆံ ကြ မလဲ။ မစု ပိန်သွားတယ် ဆိုတာလောက် နဲ့ တော့ ရိုးသားတယ် မဆို နိုင်ပေ။
ဘီဘီစီ သတင်းသမား စတီဖင် ဆော့ကာ က တော့ဖြင့်၊ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ အသံခပ်တိမ်တိမ် ထဲ ကို၊ ချွန်မြ တဲ့ မေးခွန်းတွေ နဲ့ ခပ်နက်နက် တူးဆွ ရှာဖွေ ခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခု စာလောက် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ခံခဲ့ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တကွ ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ အကျဉ်းထောင်တွေမှာ၊ အပြင်မှာ ဘ၀ တွေ ကျေပျက် ခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူ တွေ အပေါ် တောင်းပန်ဖို့ ရှိပါသလား တဲ့။ ဒီမိုကရေစီ အစစ်ဆီ ကို တကယ်သာ သွားကြတော့မယ် ဆိုရင်၊ ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ အမှားအယွင်းတွေ အပေါ်မှာ၊ တောင်းပန်ဖို့ နောင်တ ရဖို့ မရှိဘူးလား တဲ့။ စူးရှ လိုက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ။ အားရစရာ ကောင်းလိုက်ပါပေါ့။
ဒါပေမဲ့ သမ္မတ ရဲ့ အဖြေတွေကတော့ အားရစရာ မကောင်းခဲ့ပါ။ အမှန်တရားကို မဖော်ပြ နိုင်တဲ့၊ မ၀န်ခံ ရဲတဲ့၊ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် အသံအက်အက် အဖြေများသာ။ ပြန်လည် သင့်မြတ်ခြင်း ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင် တခု ဆီ ကို ရောက်ဖို့၊ အပြစ်ဖြေ ၀န်ခံ ခြင်း နဲ့၊ ကျေအေး လက်ခံ ခြင်း ဆိုတဲ့ အဆင့်တွေ မပါပဲ သွားလို့ မရ ဘူး ဆိုတာကို၊ အားလုံး မေ့များ နေကြပြီလား။ တဖက်က မေ့ချင်ယောင်ဆောင် နေတာကို၊ တဖက်က လည်း တောင်းဆို ဖို့ မ၀ံ့မသာ ဖြစ်နေလေ ရော့သလား။
ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် တာဝန်ရှိသူ ဒေါ်တင်ထားဆွေ ရဲ့ မေးခွန်းတွေကလည်း၊ တာဝန်ကျေကျေ ရဲရဲတင်းတင်း ၊ လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စ ကို မီးမောင်းထိုး သွားသည်။ သို့ပေမဲ့၊ မီးမောင်းကို အကြည့်လွှဲ သွားသူကတော့ ၊ ကျနော် အခုန ပြောခဲ့သလို.. နှင့်ပင်၊ ပြီးသွား ခဲ့သည်။
အဖြေရခက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ အမှန်တရား နဲ့ တရားမျှတမူ ကနေ ကင်းကွာနေခဲ့တဲ့ လူတစု အတွက်၊ ရိုးသားမူ နဲ့ ၀န်ခံမူ မပါရင် ဖြေလို့ကို မရနိုင် တဲ့ သိပ်ကို ခက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မို့၊ တကယ်ဆိုရင်၊ ဘာမေးခွန်းမှ အမေးမခံပဲ၊ အရင်တုန်းက၊ ခေါင်းဆောင်ကြီးလို၊ အသံတိတ်နေတာ က ပဲ၊ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခုတောင်၊ သမ္မတ ကို၊ ဘီဘီစီ က မမေးခင်မှာ၊ ဘေးမှာ ၀ိုင်းရံ နေတဲ့ အရာရှိတွေထဲက၊ အဆင့်မြင့် မြန်မာ အကြံပေး တယောက်က၊ သူ့ ကို ခပ်လှမ်းလှမ်း ကို ခဏ ခေါ်သွားပြီး၊ အကယ်လို့ မေးခွန်းတွေကို မကြိုက်လို့ ရှိရင် သမ္မတကို မဖြေခိုင်းဘူး… လို့ ဈေးစစ် တဲ့ အကြောင်း၊ စတီဖင် ဆော့ကာ က၊ " ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား" ဆိုတဲ့၊ ဆောင်းပါး အတို တပုဒ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ ဒါဆို.. သမ္မတ ကို အကြံပေး တယောက်က ထိန်းချုပ် နိုင် ခွင့် ရှိတယ် တဲ့ လား။
RFA အစီအစဉ်ကနေ .. " ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုလည်း ခင်ဗျားတို့ သိတဲ့ အတိုင်း .. အနှစ် နှစ်ဆယ်လုံး တောက်လျှောက် ဆန့်ကျင်နေခဲ့တဲ့ အနေအထားကနေ…" ဆိုတဲ့ အဖြေ တပိုင်းတစ ဟာ၊ ဆီသုတ်ထားပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ ထဲကနေ၊ ကွက်ကျန် ခဲ့တာ များလား။ ပြည်သူတွေ တခဲနက် ဆန္ဒပြု ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ … လို့ ရော၊ ဘယ်လို ယုံကြည်မူ နဲ့ ရဲရဲတင်းတင်း ပြောနိုင် ခဲ့ တာလည်း ။ နာဂစ် ကာလ ပြည်သူတွေ ရဲ့ တခဲနက် နာကျင်မူ တွေ ကို များ၊ အသုံးအနှုံး လွဲ ခဲ့ လေသလား။ သွေးထွက်သံယို မရှိ တဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း စိမ်းစိမ်းလန်းလန်း ပြောင်းလဲမူ ဖြစ်စဉ် လို့ ကမ္ဘာက အတော်များများ မျက်စိ လျှမ်း ပြောနေသလို၊ သမ္မတ လည်း၊ မျက်စိလျှမ်း ပုံ ရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ ဒီနေရာမှာ မျက်စိ မလျှမ်းသလို၊ သတိ လည်း မမေ့ ခဲ့ပါဘူး။ အခု အပြောင်းအလဲ ဟာ ၁၉၈၈ ကတည်းက စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး၊ ကြားထဲမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် သံဃာတော်လှန်ရေး ကိုလည်း ထဲ့တွက် ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်၊ သွေးထွက်သံယို မူ မရှိဘူး ဆိုတာ၊ မဟုတ်ပါဘူး လို့… ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ်က အမေးအဖြေ တခု မှာ၊ အတိအလင်းကို ထောက်ပြ သွားခဲ့သည်။
ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ခေါင်းစဉ်ပေးထားသလို.. ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သမား လား.. နောက်ပြန်မဆုတ်တော့မဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်စဉ် တွေလား ဆိုတာကတော့၊ မိမိ သဘော ဆန္ဒရှိသလို သုံးသပ်ကြည့် ကြ ဖို့ပင်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တော့ ပြောသည် ။ အခု ဖြစ်စဉ်တွေ ကို လူတွေ သံသယ ရှိနေမယ်ဆိုတာ နားလည် လက်ခံ လို့ရပါတယ်.. အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အလိမ်ခံခဲ့ရတာတွေ လည်း ရှိခဲ့တယ်. ဒါပေမဲ့၊ အဲဒီ သံသယ တွေက၊ ရှေ့ဆက်ရမဲ့ လမ်းခရီး အတွက် အနှောင့်အယှက် အဟန့်အတားတွေ မဖြစ်သင့်ဘူး .. ဆိုတဲ့ သဘောထား ပေးထား လေ တော့…ကဲ..ဘာတတ်နိုင်မလဲ.. ဒီလိုပဲ တရွေ့ရွေ့ တိုး ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီ ကို ချဲ့ထွင် သွား ကြ ယုံသာ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. တို့တာဝန် အရေးသုံးပါးကို လျှော်ဖွပ် မီးပူ တိုက်ထားတဲ့ အဟောင်းထည် စကားလုံး..သဘောထား အမြင် တွေ ကြားထဲမှာ၊ ပိုက်စိပ်တိုက် ရှာ နိုင်ရင်တော့၊ အသစ်နီးပါး ကောင်းလှတဲ့၊ အဟောင်းထည်လေး တချို့ ရချင် ရ နိုင် မည် လို့ မျှော်လင့်ပါ သေး သည်။ ခပ်လတ်လတ် လေဘေးထည် လေး တွေ ဆိုရင်ပဲ၊ နိုင်ငံရေး မုန်တိုင်းကြမ်းကြီး တွေ အောက်က၊ ပြန်လည် ထူထောင်စ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လေး အတွက်၊ သင့်တော် လှပါပြီ။
နိုင်ငံတကာ က၊ ၀ိုင်းဝန်း ကူညီ ကြ တဲ့၊ ငွေကြေးရံပုံငွေ တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ တွေ ၊ လေဘေးထည်တွေ လို ၊ ဈေးကွက် ထဲ ရောက်မသွားဖို့ ကို တော့ ၊ နာနာ ဆုတောင်းရ ပေ တော့မည်။
၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်
Posted: 09 Oct 2012 10:30 PM PDT
4 jam dalam neraka 10 setan.
SUBANG JAYA: Empat jam menjadi tempoh amat lama dan penuh sengsara bagi seorang wanita apabila dia dirogol bergilir-gilir 10 lelaki warga Myanmar selepas 'diculik' ketika menunggu bas untuk ke tempat kerja di Puchong Perdana, di sini.
"Mangsa yang ketakutan dan tidak mampu melawan dibawa ke sebuah rumah flat di kawasan berhampiran dan di situ ada lapan lagi lelaki warga Myanmar menunggu.
"Dua daripada suspek mengikat kaki serta tangan mangsa sebelum seorang demi seorang merogolnya tanpa belas kasihan biarpun mangsa merayu dikasihani," katanya - HM.
Posted: 09 Oct 2012 08:22 PM PDT
COMMENT By PROF SHAD SALEEM FARUQI from Kyaw Kyaw Oo's blog
Source: The Stars, Malaysia
Freedom per se has no value. It is what freedom is for. It is the use to which it is put. It is the sense of responsibility and restraint with which it is exercised. THE crude and disgusting video by some American citizens mocking Prophet Muhammad has caused great anguish to Muslims around the world. Blasphemous provocations by some media mavericks in France are adding insult to injury.
Blasphemy isaform of hate speech. Andrew March admits that "many in the West today use speech about Muhammad and Islam as cover for expressing hatred towards Muslims".
In the US, the First Amendment of the Constitution has since the beginning been interpreted to mean that "prior restraints" on freedom of expression are not allowed.
At the Food and Drug Administration, they spy on their own employees' email. At the Department of Defence any soldier who speaks about government lies in Afghanistan or Iraq is jailed. Twenty-seven laws exist to monitor social media content.
European record is even more reflective of double standards. Public order laws are used regularly in Britain and Germany to criminalise "politically incorrect" expressions or pro-Nazi ideas and to punish any comment, research or analysis that departs from the officially sanctioned version of the holocaust.